यसरी म बेश्या बनें
सुषमा देवकोटा \_ काठमाडौं
डिल्लीबजार जानु पर्ने भएकाले म बागबजारको बाटो हिँड्दै थिएं । पिके क्याम्पसको गेटनेर पुग्नै लाग्दा कोहि मेरो अगाडी आएर भन्यो-‘ के छ उषा ‘ ?
उ फेरी हाँस्दै बोली -‘नराम्री भएको छु अरु सबै उस्तै हो ।’
ओई तँ मलाई फँसाउन आएको रैछेस् होईन ? म नहुँदा डान्सबारमा काम गरिस, कती जना संग मस्ती मारिस । अब मलाई भिराउन खोजेको त्यो बच्चा ? हेर् मैले यहि भन्न फोन गरेको थिएं । म तँलाई माया सायाँ के गर्दिन,तँ जस्तो केटी मेरो जीवनमा बति आए कति गए, उसले हाँस्दै भन्यो ।
मलाई यी सबै कुरा पत्याउन गाह्रो भईरहेथ्यो । अनिल रक्सी खाएको छौ के हो ? मैले नरम हुँदै भने ।
कसरी गर्नु, तिमीले मलाई जुन कोटेश्वरको कोठमा भेटेको थिएउ, म त्यो कोठाबाट भागेर हिँडे । सामान त पहिले नै उठाई सकेका थिए अनिललाई पठाउँदाको ऋण तिर्न नसक्दा । बाँकी पैसाको लागि फोन गर्ने र ढोका हान्न आउनेको भिड लाग्थ्यो । एक दिन लगाउने लुगा एउटा झोलामा हालेर त्यो ठाउनै छोडेर हिँडे । ऋण दिनेहरुको फोन आउछ भनेर त्यो सिम नै भाँचेर फ्याकीदिएं । तिम्रो नम्वर त्यही सीममा थियो । त्सपछि सुकेधारामा कोठा खोजें । नानी त्यहीँ जन्मेकी हो । दुखको बेलामा के होस हुनु यार उसले भरिएका आँखा बाँया हत्केलाले पुछि । उसले फेरी थपि उषा म तिमीलाई संधै लाटी भन्थें, हेर म बाठी भएर जीन्दगीलाई नरक बनाएं ।
मैले के भनेर उसलाई सम्झाउने शब्द नै पाईन । सपना तिम्रो मोवाईल नं, कति हो ? उसले र मैले एक अर्काको नं. राखेउँ ।
मलाई यो उसको खुषी मिसिएको हाँसो र ‘लाटी’ सम्बोधन साह्रै-साह्रै राम्रो लाग्यो ।
एक दिन कुरै कुरामा उसले भनि म सात बर्षको हुँदा आमा बित्नुभयो, बुबा त म गर्भमा हुँदानै बित्नु भएको रे । त्यहि त हो दाई भाउजुले त्यति वास्ता गर्दैनन् मेरो । ६ कक्षा सम्म मात्र पढ्न पाएं । तिमीलाई मेरो घर लान पनि पाएको छैन,भाउजु रिसाउनु हुन्छ मैले घरमा कोहि लगें भनें । सम्पत्ती त छ नि हाम्रो, काठमाडौं कै लोकल बासिन्दा हौं हामी । जति भएपनि मेरो हातमा केहि हुँदैन । धन्न दाईसंग कराउँदा कराउँला एउटा पार्लर खोल्न सकें । बाउ आमा जीउँदै भएको भए, जीन्दगी अर्कै हुन्थ्यो होला मेरो । उ यि सबै कुरा हाँस्दै सुनाउँथी, न मनमा पिडा, न अनुहारमा उदासिनता हुन्थ्यो उसको ।
गोरो बर्ण,ठुला ठुला आँखा, मिलाएर लगाएको गाजल, ह्यरकलर गरेको खैरो कपाल,छोडे पनि बाटे पनि सपनालाई उत्तीकै सुहाँउथ्यो । मिलेको शरिरमा जे लगाएपनि उस्तै राम्रो देखिन्थ्यो । म साह्रै प्रभावित थिएं, उसका सुन्दर गुलावी ओठबाट निस्कने हाँसो लोभलाग्दो थियो ।
दिन बित्दै थिए, मेरो आई.ए. पहिलो बर्षको परिक्षा सुरु भयो । परिक्षा कस्तो भयो रु सपना नै सोद्थी हरेक दिन । मेरो परिक्षा राम्रो भएकोमा उ खुशी हुन्थी ।
एकदिन सपनाले आफुलाई एउटा केटा मन परेको कुरा गरि । मलाई हेर्न हतारो भयो, सपनाले सुनाई उ बि.ए दोस्रो बर्षमा पढ्दै छ, शनिवार उसको कलेज छुट्टी हुन्छ । हामी नगरकोट घुम्न जाँदैछौं म तिमीलाई लैजान्छु ।
नजिस्काउ है बिचरा उ तिमि जस्तो हावा छैन् । यस्तै यस्तै कुरा गर्दै हामी नगरकोट पुग्यौं । म बाटोभरी प्रायः चुपचाम नै रहें । अनिलले लाटी भनेर जिस्काई रहयो । दिनभर घुमेर फर्कियौं हामी । छुट्ने बेलामा अनिलले हास्दै भन्यो, -दिनभर हाम्रै गफ मात्र सुन्न आए जस्तो भयो उसलाई ।
साँझतिर गोगंबुको गणेशथान आएर हामी छुट्यौं, जाने बेलामा अनिलले भन्यो बाई सपना, मलाई हेर्दै जिस्कायो, – बाई मिस लाटी ।
सपनाको ठाउँमा अरु भएको भए, छोरीलाई मारेर आफु पनि आत्महत्या गर्दा हुन् या त छोरीलाई बाटोमै छोडेर आफनो सुर गर्दा हुन् । यति धेरै दुःख पाउँदा पनि सपनाले न आत्महत्या गरी न छोरी छोडि । शिक्षित जमातले भन्छन्, ‘त्यो केटालाई कारबाही गर्नु पथ्र्यो । डिएनए चेक गराएरै भएपनि उसैको छोरी हो भनेर प्रमाणित गर्नु पथ्र्यो ।’ भन्नु र भोग्नु अर्कै कुरा हो । एक छाक टार्न सपनाले कति कति क्षण आँशु बगाई, के- के गरी त्यसको हिसाव किताव उसले खोज्न थालि भने कसले सहयोग गर्छ उसलाई ?
६ बर्षका बालकको लिंगमा रबरले बाँधेकी क्रुर वार्डेन जानुकालाई जम्मा २५ दिन जेल सजाय फैसला
ब्रेथिङ स्पेस अफ औंलाहरु – रसिक राज